"Macril": kareemka Antifungal | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Waqtiyada firaaqada, Caafimaadka
Nasiib darrose qofna kama badbaadi karo inuu fungus ku haysto meel kasta oo jirkiisa ka mid ah iyo inaad kufashilmi karto meelkasta iyo wakhti kasta adigoon xitaa ogaan. Dhinaca wanaagsan, in kasta oo sida fangaska culeyska badani u noqon karo, gaar ahaan haddii aynaan waqtigooda ku daaweyn, waxaa jira boqolaal daawo oo awood u leh inay ka dhigaan kuwo hor-jooga oo ka tirtira jirkayaga gebi ahaanba.
Mid ka mid ah kareemada antifungal ee ugu caansan uguna waxtar badan waa Macril, kaas oo si gaar ah loogu talagalay dermatopathies bararsan oo ay ku murugsan tahay bakteeriyada, fungal ama infekshan isku dhafan: dermatitis oo mar labaad ku dhacay bakteeriyada ama fungi, sida aan ka akhrisan karno buug-yaraha aan ka helno sanduuqa kareemkan.
Xaqiiqdi dhamaan cuduradaan aad hada aqrisay uma muuqdaan kuwo sifiican kuu yaqaan, laakiin xaqiiqdii waan wada fahamsanahay hadii aan kuu sheegno Macril, Waa kareemka heer sare ee loo qoondeeyay dhammaan cuncunka ama guduudashada in raggu ku xanuunsan karo guskeena. Waxaa sidoo kale laga codsan karaa meelaha kale ee aan dib ugu laaban karno dhibaatada ka timaadda fungus.
💡Ma wax dhibaato ah ayaad ku leedahay cabirka guskaaga? Haddii guska yar uu yeesho dhaawac, markaa waan kugula talinaynaa ka dajiso buugga Master-ka guska halkan si loo ogaado xeeladaha ugu fiican ee loogu talagalay badso cabirkaaga.
In kasta oo ay kaliya kareem fudud tahay, oo waliba waxaa loo iibsan karaa qaab aad u fudud oo fudud dhib la'aan, Waa inaan ku talinaa oo ka dignaa in qofna uusan dalban karin iyada oo aan loo baahnayn warqad dhakhtar iyo gaar ahaan iyadoo aan dhakhtarku eegin dhibaatadeena. Waa wax aad looga xishoodo in loo tago dhakhtarka si loogu sheego in aanu leenahay fangas iyo in ay ku jiraan xubintayada taranka, laakiin ha ka welwelin maxaa yeelay dhakhtarkayagu hore ayuu u arki doonaa waxyaabo aad uga xun hubaal.
Aad bay caadi u tahay in dhakhaatiirtu u qoraan kiiska balanbaalis, taas oo ah cudurka cuncunka iyo guduudashada xubinta taranka ragga isla markaana ku dhacda rag badan mar uun noloshooda. Laakiin cadarkan waa inuu kaliya lagu dalbaday warqad dhakhtar qoro.
2 Xagee ka iibsan karnaa Macril?
Waa kuwan qaybaha ugu muhiimsan ee buug-yaraha xirmada ee kareemkan:
TALLAABADA TAYNAHA Bakteeriyada bakteeriyada, antifungal, anti-bararka loogu talagalay isticmaalka jirka.
KU TILMAAN: Cudurka maqaarka ee infakshanka oo ay ku adkaato bakteeriyada, fungal ama infekshan isku dhafan.
Dhismo: 100 g kasta wuxuu kakooban yahay: Betamethasone 17-Valerate 0.10 g, Gentamicin Base (as Sulfate) 0.10 g, Miconazole Nitrate 2.00 g. Ku guuleystayaasha
Bandhigyo: Kunteenarada 20 g.
Xagee ka iibsan karnaa Macril?
Maanta waxaan ku iibsan karnaa Macril qaab aad u fudud oo fudud inkasta oo ay ugu fiican tahay haddii dhakhtarkayagu kuu qoro, haddii aad go'aansato inaadan u tagin dhakhtarka, waxaad ka iibsan kartaa internetka, iyadoo loo marayo dukaamo badan oo dijitaal ah. Qiimaheeda waa mid la awoodi karo, in kastoo haddii qiimaheedu sarreeyo aan u maleynayo inay mudan tahay in la bixiyo si loo arko sida cuncunka jirkeenna, fangaska awgeed, u baaba'o.
Mar labaad Taladayada ayaa ah inaadan iibsan Macril si xor ah, iyo wax aad uga yar inaad ku dabaqdo qayb kasta oo jidhkaaga ka mid ah, laakiin waad xor tahay oo waad samayn kartaa wax kasta oo aad is leedahay way ku habboon yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » «Macril»: ​​kareemka Antifungal
Waxay i siisay natiijooyin aad u wanaagsan waqtiyadii aan u isticmaali lahaa cagaha iyo cududda fungus.
Maanta waxaan mar labaad ku iibsaday fungus ka soo baxday faraha dhexdooda hal gacan waxaanan rajaynayaa inaan helo natiijo isku mid ah had iyo jeer.
Waxaan u arkaa inay xoogaa qaali tahay: $ 30.90 (ARG)
Su'aal, miyaa la saari karaa dusha sare, maxaa yeelay dhibaatadu waxay tahay anigu ma yareyn karo maqaarka buuryada, tan iyo markii ay ku xanuuneyso, sida haddii ay dilaaceyso: S
Waxaan kugula talinayaa Ninka 1 Saliida Man ama INTIMA labadaba waan isku dayay waxayna aad ugu adeegaan inay nafaqeeyaan guska oo ay siiyaan maqaarka ilmaha. Kolombiya waxaa iibiya wakiil ka socda waddanka oo dhan. Waxay had iyo jeer ii dirtay aniga oo aan wax dhibaato ah lahayn oo 100% asal ah. Waxay ka helayaan emaylka soo socda: felp@hotmail.com ama seelka aan isleeyahay waa 3102860240
Ku soo jawaab Andres Felipe
imisa jeer ayaa la marinayaa cadarka tan iyo markii la kaadiyo oo la nadiifiyo qaybta hore
Jawaab Oscarosvaldo Alvarez@yahoo.com.ar
MAANTA 17-05-2017 WAA $ 204.11 WUXUU NOQON DOONAA IN 7 SANNO AY SAMBAR YAHAY Cudurku
Jawaab JUAN PEREZ
Waad salaaman tahay Pablo, wax aad u eg ayaa igu dhacay aniga laakiin kareemkaan wax badan buu i caawiyaa, in kasta oo la yiraahdo ku dhaqista saabuun dhexdhexaad ah oo aan lahayn nooc cadar sidoo kale way i caawineysaa.
hahaha Fernando, waxaan jeclaan lahaa inay maanta noqoto $ 30 hahaha !! $ 600, waa hadda!
Waa kareem aad ufiican Qiimaha waxaan ku iibsaday 18 pesos. (Arg)
Ku jawaab suus
Haye, waxaan ahay uur waxaanan doonayay inaan ogaado haddii kareemkani ii shaqeynayo, maadaama calool xanuun iiga muuqato cuncuna badan, mahadsanid
Ku jawaab marina
Hello Marina, fiiri kareemka loo yaqaan 'MACRILes cream' ee loogu talagalay fangaska, bakteeriyada iyo anti-bararka loogu talagalay isticmaalka jirka. Aad iyo aad ayuu u fiican yahay waana sababtaas awgeed, kareemkaan ayaa si weyn loogu taliyay haweenka uurka leh. La tasho dhakhtarkaaga umulinta waxaanan rajaynayaa in jawaabtaydu ku adeegtay adiga iyo nabadgelyadaada maskaxdayda xaaskaygu waxay qabatay wax la mid ah waxayna siiyeen hypoglos. Dhunkasho.
Ku jawaab lucas ayosa
La tasho dhakhtarkaaga. Iska dhaaf waxa aad ka akhriso khadka tooska ah.
daaweyn aad u wanaagsan ... marwalba shaki ayaan qabaa, maxaa yeelay dhowr jeer ayey iga bogsiisay fangaska ... mahadsanid
Iga raali noqo, finnigayga ayaa kujira waxoogaa yar waxaanan rabaa inaan ogaado haddii aan marsan karo kareemkan, waxaan la joogay finankaas ilaa 4 bilood wax ay iga qaadaanna waxaan horay u isticmaalaa miconazole sidoo kale ketoconazole iyo wax aanan horay usameyn karin , mahadsanid
HA JOOJIN LA TASHIGA DHAKHTARKAAGA, WAXAY NOQON KARTAA CUDUR LAGU QAADO GALMO.
Taasi waxay sababi kartaa sabuunta aad isticmaasho .. dhowr jeer ayey igu dhacday aniga, tusaale ahaan mar kasta oo aan iibsado xoogaa rexone ah (beddel saabuunta oo haddii aysan dhicin ka dib ka fikir nooc ka mid ah fungus ama wax kale ..)
Waxaan ku iibsaday $ 3
Makuuril qurema ma saarin kartaa ilmo 4 bilood jira?
Ilmahaygu wuxuu leeyahay finanka xafaayadda oo waa 4 bilood jir. Miyaan isticmaali karaa kareem macril?
Ku jawaab nati
Macril waxaa loo qoray ilmahayga, finanka xafaayadda awgeed. dhakhtarkaaga caruurta ayaa kuu qoray, hada waxaan rabaa inaan sameeyo baaritaanka
Jawaab ku celiya
Ma isticmaali karaa makril carruurta hal sano jir ah?
aad u wanaagsan, waan kor u qaadayaa
Fadlan, waxaan ubaahanahay inaan ogaado farmashiyayaasha ku yaal Lima-Peru ee kareemka macril lagu iibiyo… way ii qoreen laakiin farmashiyayaashu waxay soo sheegaan inaysan haysan… waa deg deg Mahadsanid.
maxaa soo baxa ?? waa mid wax ku ool ah. Sababtoo ah gacmahayga waxaa ku dhaca biyo nabarro, dhakhtarka maqaarkuna wuxuu yidhaa waa ongos
Ku jawaab qaysar gutierrez
Waxaan leeyahay meelo dhibco ah oo ku yaal gacanta, waxayna ii sheegeen inay yihiin fangas waxaanan isku dayay wax kasta oo ketoconazole, terbinafine oo waxba iima taraan waxaan iibsanayaa kareemkan waxaanan rajaynayaa inay natiijooyin fiican i siiso
Ma cadarkan waxtar u leeyahay babaasiirta… .. ???
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado .. sababta dhakhtarkaygu igula taliyay!
Waxaan ku noolahay England laakiin halkan kama iibsan kartid Macril. Ayaa og in aad ka iibsan karto khadka tooska ah?
Waad salaaman tahay, sidee tahay? Waa hagaag, ragga, badiyaa iskama daaweeyo, ma ...? Waxaan u sheegayaa inaan isticmaalo kareem la yiraahdo ELOCOM in halabuurkiisu yahay mometasone taasna ay tahay wax soo saar aad u fiican ... sidoo kale ma aha sida corticosteroid-yada kale ee maqaarka u soo saara nugul waa SUPER !!!!, laakiin aniga wuxuu isku dayi doonaa inuu waxbadan ka ogaado dawadan loo yaqaan MACRIL si loo arko waxa kale oo tilmaam, diidmo iyo isdhexgal ah ee aad sameyso iska ilaali naftaada iyo nasiib wacan .. !!!
hello Waxaan ku haystaa fangas suulasha guaton waxaan u aaday dhaqtar waxaan u qoray daawo antibiyootiko ah iyo kareemo fangaska waxaan la joogay daawaynta mudo sadex asbuuc ah waxba ma jiraan, waxay ku dhagan tahay cagaha lugtiisa iyo hareeraheeda waxayna umuuqataa inaan sidoo kale gacanta ku haysto, waxaan u baahanahay taageero aan qaadi karo, waxaan joogaa Chile
Ku jawaab celcelin
Waa inaad qaadataa kiniin antifungal ah
Dhab ahaan ... haddii ay tahay fangas antibku ma shaqeynayo ... daweyntuna waa inay noqotaa mid afka ah iyo mid afka ah
Haddii aad ku hayso wax ka badan hal meel oo jirka ah, waxaan kugula talin lahaa inaad qaadato fluconazole 150mg, qaab maamul ahaan wuxuu sheegayaa inta la qaadanayo iyo inta jeer ee noocyada noocyada fangaska ah.
Doqonnadaas oo dhan, haddii takhtarkaaga ama dhakhtarka maqaarku kuu qoro waa sababta oo ah way shaqaysaa wayna shaqaysaa, anigu garan maayo sababta ay halkan u weydiinayaan: S.
Jawaab Juan P.
uffff waxaa jira dhakhaatiir aad u tiro badan oo dhaawac soo gaadhay!
Ku jawaab anoni ...
Fiid wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado in makril loo adeegsan karo ilmahayga dabada ka xanaaqsan, waa laba bilood jir.
Waad salaaman tahay Javier, makrilku wuu kaa xanaajin karaa laga yaabee ... Waxaan kugula talinayaa inaad iibsato kareemka hypoglos ee bogsanaya ee kareemku u yahay kiisaskan gabadhayda seddax bilood jirka ahna waxay ku isticmaashaa talobixinta dhakhtarkayga carruurta, iibso iyo goorta ku dheji waa inaad si aad ah u codsatid markasta oo aad xafaayada bedesho laakiin marka hore si fiican u maydh aagga ay dhibaatadu saameysey guud ahaan ka dibna ku dheji, is deji kareemku si fiican buu kuu qaban doonaa, waa warqad dhakhtar qoray laakiin farmashiyaha ayayna ku iibiyaan adiga maxaa yeelay waxay ogyihiin inay tahay cuncun. Waxaan sidoo kale u isticmaalaa in lagu qaso wax yar oo ka mid ah saliidda bb jonson si ay si fiican u kala firdho oo saxarada iyo saxaradu aysan u sii wadin inay keenaan xanaaq dheeraad ah, iibsashadiisu waa amaan .. weydii dhakhtarkaaga carruurta.
MA AHA NACAS YIDHI WUXUU UU DALBADAHAY DARMALKA, ISKUUNA AY IIGU DHACDAY SOO DHAWEYNTII SANADOODA BADAN OO AAN AQOONSADAY WAALIDKANA IYO CHAU FUNGI (MACRIL) I XASUUSO MAXAAN KUGU DARAAYA markale !! !! ARG.
Iska ilaali dhallaanka iyo haweenka uurka leh. Corticosteroids waa halis. Waxay leeyihiin khatar aad u sareysa. Waxaa lagula taliyaa oo keliya haddii faa iidadu ka badan tahay. Iyagu waa xulashada ugu dambeysa !!!
La tasho dhakhtarka
Waad salaaman tihiin dadka, waxaan idiin sheegayaa in aan lahaa 3 sano ka hor in aan fangas ku lahaa wejigayga iyo bushimaha. Waxaan u tagay dhakhtarka maqaarka wuxuuna igu taliyay kareemo aan aniga ii shaqeynayn, 8 bilood ka hor waxaan la tashaday khabiir kale wuxuuna igu taliyay MACRIL, runtu waxay tahay inay isiisay natiijooyin aad u wanaagsan ..! Aad baan u quustay maxaa yeelay waxay u maleynayaan in shaqada oo aad loo soo bandhigi karo aysan ku habboonayn aniga ahaanna qof ahaan waxaan dareemay inaan aad u xumahay, laakiin waxaan kula talinayaa iyaga nooc kasta oo rag ah oo kula soo xiriiri kara, Hadda qaybaha xubinta taranka runta ayaa ah in aanan garanayn ... qatar uma galin inaan kuugu sheego wax aanan aqoon. Waxaan rajeynayaa inay sidoo kale ku caawin doonto, salaan
Waxaan hayaa ilmahayga hal sano jirka ah oo leh granite guska xubinta taranka dhakhtarkiisuna wuu ila taliyay, waa wax aad u fiican
Ku jawaab aleli
Waad salaaman tahay, ma u isticmaali karaa Macril casaanka iyo cuncun ku yimaadda?
ilaa macril dijo
Kariimtani aad ayey ufiican YAHAY INAAN FANGUS KUGU DHEX GALNINA AMA CAGAYGA
Ku jawaab macril
Waa salaaman tahay, waxaan doonayey inaan ogaado haddii ay u shaqeyneyso ilmahayga oo jira 10 bilood
Jawaab maria pamela
Miyuu faa'iido u leeyahay muruqyada xubinta taranka haweenka?
SALAAN, CREAMKAN MA LOO ISTICMAALAA FUNGI?
Waa hagaag, waxaan ku weydiinayaa su'aal Ka dib markii aan la galmooday saaxiibkay, bushimaha kore ee xubintayga taranku waxay bilaabeen inay wax yeelaan waxaanan ogaaday in waxoogaa dillaac cayriin ahi iga baxeen Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado macrilku inuu shaqeeyo ama kareemka kale maxaad ku talineysaa?
Dabcan, waxaan ku cuncunay bushimaha hoose ee xubinta taranka inta lagu guda jiro uurka ka dib luminta xuubka xabka iyo dhakhtarka dhalmada ayaa igu taliyay aniga maalintii labaadna wax walba way fiicnaadeen
Waxaan ku siinayaa creampie
Waxaan ku hayaa fangas guska, laakiin macril la yiraahdo wuu fiicanyahay, Kolombiya lama helo, in hunguento kale lagu helo isla halabuurka, mahadsanid.
Jawaab jonas melo
miyaa loo isticmaali karaa aagga siilka?
Waxyaabo yaab leh ayaan ku hayaa xubnahayga xubinta taranka galmada, waan hayaa qalalan, wayna gubataa, masaakiinta waa la tuuraa laakiin kuma laaban karo noloshii uu lahaa, makril ayay igu bogsiin doontaa? Waxaan doonayaa in aan ...
Clate: taasi waxay kugu dhacdaa inaad dhigto meelo khaldan.
Ha argagixin markay bilaabato inay kala daadato.
waxa ugu macquulsan ayaa ah inaad qabtid eceirichia coli, waa "vichito" oo ku hoyanaya arrinta saxarada iyo kiiskan guskaaga, iyo haddii ka dib aad isla markiiba xiriir la yeelatid haweeney (haddii taasi ay ahaan laheyd), ku maydhista xubinta tarankaaga markii hore waxaad isla markiiba qaadsiisaa Xaaladda ay la joogto ninna taasi ma dhacdo laakiin adiga haddii aad ku qabato AMMAAN ... si looga fogaado waa inaad GASHAAD dhigtaa !!!, sidaa awgeed waxaad ka fogaanaysaa cudurrada kale sida AIDS, KU DARO, IN WAKHTIGA DHEER WUXU KUU SOO DHIGI KARAA INAAD KU DHACDO KELYYY, INTESTINALS iyo Xitaa CUDURADA QALBIGA. WAAN KUUGU TALIN LAHAA 1 °) AAD DHAKHTAR AAD, 2 °) KU SAMEE CONDON BOLUDO !!!, IYO 3 °) JOOJI METERL MEEL AADAN AAD UGU DANBAYSAN INTA AAD JECESHAHAY INAAD ILAALIN LA'AHAY ... ADIGA AY KUGU DHACDAA WAA IN PUDRA GANACSIGA OO DIYAar GAL AH AYAY KUU SII SAARAYAAN IN JI JI KALE LAGU QARSAN YAHAY !!
Ku jawaab poluto
si looga fogaado ilmo soo rididda oo ay u qaadato ortho iyo dameerka oo aad safka gashid ma awoodid maxaa yeelay way jabtaa
waa la buunbuuniyey. Waqti badan ayaan ku qaadaa su'aashan hada laakiin fekerkeyga galmada dabada ma ahan "wax aan habooneyn", laakiin waa nooc kale oo galmo aad u macquul ah oo raaxo leh dad badan. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho cinjirka galmada si aad iskaga ilaaliso taabashada xubinta taranka ee bakteeriyada kujirta dhamaan marinka dabada ee xubinta taranka guska galo, saliidee si uusan waxyeello u geysan haweeneyda, maxaa yeelay futada looma shubmayo sida xubinta taranka haweenka, fadlan samee ha u isticmaalin isla cinjirka labada aag (futada iyo siilka) maxaa yeelay hadii aad guska haweeneyda geliso xubinta taranka galmada galmada ka dib, waxaad ku qaadsiin kartaa isla bakteeriyada isla markaana masaakiinta ayaa ku dhici doonta infekshin aad u weyn oo kaadi ah Hagaag, waxyaabahan waxay ku dhici karaan ragga adiga oo kale ah. Waxaan rajeynayaa inaad gudubtay oo guskaagu sifiican ushaqeeyo (iyo)!
PS: inaad dhahdo galmada dabada waa khaldan tahay waxay la mid tahay inaad tiraahdo galmada afka waa khaldan tahay, iyo sidoo kale in raga oo dhan jecel yihiin in si fiican loo dhuuqo!
Ha noqonin kuwa nuuxnuuxsada, kuwa cuncunaaya xubintooda taranku way xoqeen iyo bye bug Bisad ayay mindi ku dhuftaan dhowr jeer maalintii iyo voila!
Jawaab Pepe Mujica
Salaan, waxaan ku cuncunayaa cagaha iyo lugaha lugaha .. cuncun badan baan hayaa dhibco gaduud ah .. Ma aqaano inuu yahay fangas .. Ma ii sheegi kartaa kareemka aan isticmaali doono ..?
deralbine, miconazole amooniyam
qaado kaniiniyada fluconazole
Waxaan rajeyneyaa inay tani ku caawin karto!
Aad bay ufiican tahay, waxaan ku kala bixiyay rootiga ...
hahahahaha, qosol badan
Ku jawaab si aad u qosol
quraacda waxay u egtahay waali !!
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan malayga ku shubi karo carrabkayga ... Waxaan ku haystaa fungus carrabkayga mise miyaad ku talinaysaa inay noqdaan wax la mid ah kareemka macril
DHIBBADANKA AFKA AYAA KU DHAAWACAY, WAAN KA HELI KARAA MACRILE
Cuncun iyo cuncun badan ayaa ku leh buuryadayda iyo madaxayga waxayna isu rogaysaa casaan waxaanan bilaabay inaan maqaarkayga ka dillaaco
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii macril loo isticmaali karo herpes?
Macril looma isticmaali karo herbes on bushimaha?
nasiib daro herpes-ka ma jiraan wax ka badan acyclovir 🙁
kareemkani miyuu ku fiican yahay carsaanyo?
Alejandra Garcia sawirka meeleynta dijo
Macril wuxuu qaas u yahay balanitada ... 2 ilaa 3 jeer 5 maalmood, marka hore aaga ku dhaq saabuun cad iyo biyo diirran ka dibna ku dheji baalashka (pokito) ... waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah daalnaan laakiin ku celi nidaamkan muddo 15 maalmood ah. tan ugufiican tan waa HEMORROISAN (buro jaalle ah) waa salaamantihiin dhammaan
Jawaab Alejandra Garcia
Wax yar ayaan kugu dhadhamin lahaa tarankaaga halkaasna waan xoqin lahaa guskeyga daqiiqado yar kadib waxaan idiinkaga tegayaa bushimo qumman oo bushimahaaga ah oo la cuni karo, hodan ku ah borotiinka una fiican maqaarka, kaliya waxay ka kooban yihiin 180 kcal halkii biyo bax. , hadaad xiisaynaysid ii sheeg
hello ami taen Waan qabtaa dhibaatada tani waxay igu qabataa casaan waxayna ii gubanayaan sida aysan waligood ii gubin sidii iyagoo gubanaaya wax walbana way dhaceen ilaa iyo habeenkaa waxaan galmo dabada ah la yeeshay saaxiib ila taliyay
Jawaab Sergio paraguy
Waad salaaman tahay, qof ma i caawin karaa fadlan, dhibco gaduudan ayaa ku yaal guska wuuna gubanayaa wuuna gubanayaa shalayna xiriirka aan la leeyahay saaxiibtey wuxuu noqon doonaa inuu isagu mar horeba cudurka qaaday. Waxayna noqon doontaa inaan isticmaali karo isla kiriimkii aan u isticmaalo buoy. Macril
Ku jawaab yimi
Aan dhalan dijo
Waxaan u maleynayaa inay labadoodaba dhakhtar aadaan .. Waxaan siiyay fangaska saaxiibkey ka dib markii aan ku siiyay barkada dhexdeeda dhakhtarkayguna wuxuu ii qoray gincan ovules iyo macril saaxiibkayna wuxuu helay macril laakiin ma aysan tegin .. Waa lagu qasbay inaad u tagto dhakhtarka. Waxyaabahani way ka sii dari karaan haddii aan loola dhaqmin si habboon.
Ku jawaab Unatal
Haye qof ma i caawin karaa
Waad salaaman tahay, qof ma i caawin karaa, waxaan ku leeyahay baro casaan guska. Shalayna waxaan la galmooday saaxiibaday, waxay noqon doontaa inuu isagu mar horeba qaaday cudurka. Waxaanan isticmaali karayey isla dufanka aan sabeeyo si aan u isticmaalo. Macril
Waxaan qabaa balanitis, qaybta sare ee xuubku waa guduud, waana bararsan yahay, ma dhaawaceyso ama gubayso iyo wax kaleba, waan fidin karaa maqaarka sidoo kale, maxaad kugula talineysaa?
Ku jawaab juancruz
marcelo iyo ana dijo
aniga iyo saaxiibtey waxaan nahay 17 jir waxaan ku qabnaa fungus cawradeena taranka. 1 bil ka hor waxaan sameynay daaweyn noo gaar ah taas oo na siinaysa wax ka badan natiijo wanaagsan. Subaxdii iyo habeenkii labadaba, waxaan guska ku marinayaa macril ka dibna waxaan ku ridayaa siilka saaxiibtay. Waxaan qaadanaa waqti dheer, waa daaweyn aad ufiican maadaama kaliya maahan inaad cudur daar u leedahay inaad qaadato waqtiga oo dhan, laakiin sidoo kale, waxaa jira xitaa fursado uu fangasku ku bogsiin doono. Aniga oo ku marmarsiyoonaya fangas, waxaan u sheegayaa saaxiibtey in iyaduna futada leedahay, anna halkaas ayaan ku daaweynayaa. Haddii haweeney kasta ay u baahato caawimaaddayda, fadlan ha joojin la xiriiridaada, waxaan diyaar u noqon lahaa inaan sameeyo daaweynteyda iyada oo aan wax kharash ah ku bixin
Ku jawaab marcelo iyo ana
hello su'aal waxaan ahay 16 sano jir waxaana wejigayga ka soo baxay dhibco cad waxaan necbahay inaan isku arko sidan): Ma jiraa qof og in kareemkaan i daaweyn doono? Mahadsanid
Ku jawaab Ailin
dharka ecohuman dijo
Dadka adiga oo kale ah ayaa dhuuqa… !!!
reerkaaguba way nuugaan
Ka jawaab eyga
Waxay u shaqeysaa dhibcaha wejiga
Jawaab ugu dir
Waxaan qabaa cuncun futada ah iyo malawadka ma kareemkaan ayaa loo isticmaalaa taas? Aad iyo aad ayey ii dhibtaa waana i cuncunaa.
Ku jawaab triganuog
Hal su'aal waxaan ku leeyahay fangaska cidiyaha cagaha kareemkaas waxay u maleynayaan inay yihiin kiten xk Wax walba waan isku dayay ibada x fadlan hadaad i caawin karto waan ku mahadsan
Waad salaaman tahay, waxaan ku leeyahay fangaska faraha cidiyahaaga oo waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii kareemkaan aad igu dili karto, wax walba waan isku dayay waxna maahan hadaad i caawin kartid, aad baan kuugu mahadcelinayaa.
Waxaan leeyahay casaan madaxa guska iyo cuncun badan ka dib markaan xiriir la yeeshay lammaanahayga xasilloon! Ma ku isticmaali karaa Deralbine MIconazole Nitrate 2%?
Sababtoo ah uma tagayaan dhakhtarka oo kama joojinayaan gunaanadka aan micnaha lahayn!
Ku jawaab Ekbara
Laga soo bilaabo dijo
Waad salaaman tihiin. Waxaan ku helay boqoshaada poronga. Aad baan u hayaa oo markay joogsato aad bay ii xanuunaysaa. U adeeg marcril ?? Ma u adeegsan karaa Vaseline ??? Waxaan jecelahay inaan sameeyo galmada dabada sidaa darteed wuu ka faa'iideystay
Ku jawaab Dari
Macril wuxuu ku fiican yahay chilblains?
Jawaab jorge blanc
Waa salaaman tahay, waxaan doonayay inaan ogaado in kareemka aniga ila shaqeynayo maxaa yeelay waxay i siisay fangas gadhka timahayguna way daataan laakiin ma helayo nooc Stain ah, kaliya timahayga ayaa dhacaya oo waxaan leeyahay halo aan timo lahayn oo dufan leh
Jawaab Sebastián Ortiz
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan marsan karo macril, guska waa casaan waxaanan tiriyaa waqtiyo maalintii gelinta
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa in aan ogaado in kareemkaan waxtar leeyahay markii cunugu uu guday xubinta taranka hadii kareemkaan loo isticmaalo in lagu bogsado mahadsanid
Waa salaaman tahay, waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii Macril uu 100% waxtar u leeyahay fungus ciddiyaha suulasha. INTAN KA BADAN MAXA LA ISKU DAYAA !!!! mana bogsan.
Waxaan heystaa guska fangasku leeyahay cuncun badanna waan xoqaa waxbadan ayaan jeclaan lahaa inaan ogaado hadii kareemka macril uu dhamaan doono fangaska xun
Dadyahow waad salaaman tihiin, waxaan idiin sheegayaa in sidoo kale aan leeyahay casaan iyo cuncun badan, aan nidhaahno madaxa guskayga waxaanan marsadaa macril iyo dawo muqadas ah.
Waad salaaman tihiin dadyow ,,, dhibaato lamid ah ayaa i haysata ,,, saaxiibteyda marwalba waxay rabtaa galmada dabada… waana xanaaqayaa marwalba…. ilaa la dhaawaco ... oo waxaan isticmaalay kareemo aloe ah ,,, (saxarka gudaha) saliid saytuun ah ,,, oo lagu qasay dhir ... daweynta guriga doña porota ... iyo voila ... ma haysto fangas dambe .. Ma aanan u galmoodin shakiga. nasiib…
12-kii saacadoodba, qaado laba kaabsal oo ah SPORASEC ama ALBISEC (Haddii aydaan ku garanaynin farmashiyaha magacaas ku yaal maaddaama waddamada ay ka kooban yihiin isbeddellada ay ka mid yihiin Secnidazole 166,66 mg + Itraconazole 33,33 mg). Tan waa in la sameeyaa SADDEX (3) maalmood.
Markaad qubaysanaysid, isticmaal pH saabuun dhexdhexaad ah gebi ahaanba. Tani waa tan, saabuunta ilmaha.
Qubayska ka dib, aagga si fiican ugu qalaji maro jilicsan, ha ku qorin warqadda musqusha.
Ku buufi Buufinta la yiraahdo BACTROMAX ama Rifamycin 1%. Waa xarun Rifamycin ah. Tan waa in la sameeyaa 12-kii saacadoodba mar, muddo shan (5) maalmood ah.
Ka tag buufinta si aad waxyar u shaqeyso ka dibna u mari kareemka ICADEN (Isoconazole 1%). Tan waa in la sameeyaa 12kii saacadoodba mar, waayo
Booska SHAN (5) maalmood.
Kadib 5 maalmood kadib, BACTROMAX iyo ICADEN labaduba waa lajoojiyay iyo a
Kareemka adag ee dhammeeya bogsashada isla markaana xoog u siiya indhacadeena loo yaqaan FITOSTIMOLINE (L). Tan waa in la sameeyaa 12-kii saacadoodba mar, muddo ah SADDEX (3) maalmood, ama intaad rabto.
Waxaan waxan oo dhan ugu sameeyay warqada usbuuc ka dib waan fiicanahay, talo ahaan kareemka marwalba waa inaad isticmaashaa lakab khafiif ah maxaa yeelay adoo dhigaya kuleyl badan oo jirka ah ayaa kareemka ka dhigaya mid dareere ah oo soo saara qoyaan (jawi ku habboon boqoshaada) ) iyo shay kale oo aad muhiim u ah ayaa ah in sonkorta laga wada tago (macmacaan eber, cabitaanka sokorta leh eber).
Kama cabbi kartid cabitaannada aalkolo bilowga illaa toddobaad iyo badh ka dib.
Madaxa guska waxaad ku ridi kartaa kareemkan macril ... fadlan ka jawaab
Ku jawaab Yoonatan
Waad salaaman tahay, maalin wanaagsan, xagee laga heli karaa? Waxaan ka imid Mexico, farmashiyehee baa leh.
Waad salaaman tahay ... kareemka macrilku aad buu u wanaagsan yahay, waxaan u isticmaalay waqti yar ka hor warqad dhakhtar oo loogu talagalay dhibaatada fangaska cagta, waan yareeyay qaniinyada oo waxaan dib u cusbooneysiiyay maqaarka qalalan ... hadda dhibaatadu aniga ayey igu soo noqotay, mar horena Peru ha iibin, meel walba waan ka raadiyey mana aanan helin, qof ayaa iga caawin kara inaan helo, maadaama halkan aanu oolin wax soo saar la mid ah oo isku mid ah, laga yaabee in shaybaarka soo saaraa uu i caawin karo, fadlan ... emailkaygu waa oguraboy2970@hotmail.es Waan qadarin doonaa caawimaad kasta.
Tilmaamaha looga saarayo urka dhididka dharka